Top European Train Tours You Shouldn't Miss | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Top Yurub Tareen Tours Waxaad ma habboon tahay Miss
Safrida meel kasta oo had iyo jeer waa mid cajiib ah oo aynu u qaadanaa in la ogaado magaalo qurux badan, taariikhda dalka ama dhaqamo aad u kala duwan ka annagaa. Si kastaba ha ahaatee, Qasab ma aha in aad meel fog tago guriga si ogaado meelaha quruxda badan. Waxaa jira dhowr tours tareenka Yurub la soo jiidashada gaar ah in shaki mudan yihiin meel on liiska our socotada. From soo jiidasho magaalooyinka Yurub si caasimadaha la taariikh hodan ah iyo saameynta dhaqanka, qaado waqti in la ogaado oo magaalooyinka in ay booqdaan.
Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tours tareenka Yurub ma aha in aad ilowdo:
Waxaan u tag ah dalka diiran yar, gaar ah, gobolka qurux DALKA Basque. Halkan waxaan ka heli waxa caasimada labaad ee Yurub ee dhaqanka ku jiray 2016: San Sebastian. magaaladan waxaa u qurux badan oo ku yaalla xeebta woqooyi had iyo gooldhalinta dunida ay gastronomic dalab oo ay cawayska noole. Dhanka kale, galida, Xisbiyada iyo jawiga dabacsan waa wax aad ku dhici doonaan jacayl la. Waxaa caadi ah in heli dhacdooyinka tahay oo ku saabsan, music, iyo cayaaraan dhammaan daafaha magaalada. Sidaa darteed, it is one of the greatest in Spain iyo qayb ka mid ah tours tareenka Yurub in ay soo booqdaan oo ku qaataan maalinta ay ogaadeen meelaha ay ugu fiican oo ku dhameysan fiidkii la qado delicious iyo cocktails by badda.
In wadnaha ee Germany, ku saabsan saacad ka Berlin, waxaa jira magaalo kale ma aha in aad ilowdo. Leipzig waxaa sii kordheysa soo baxaya sida kale ugu casri ah oo macne caasimada. Waxaa laga yaabaa in ay tahay sababta oo ah taariikhda, lala magacyada sida Bach iyo Wagner; ama, laga yaabee, waayo meelaha ay cagaaran oo waaweyn, weli ma guulaystay by gacmaha kuteen. Waxa kale oo ay noqon kartaa in ay naf xasilloon, halkaas oo farshaxanka iyo music waa caadi ahayn. Ilaa hadda sida sharafta leh tours tareenka Yurub tagaan, Sida xaqiiqada ah tanu mid waa u qalantaa.
Bremen in ay Tareenadu Leipzig
Berlin si Tareenadu Leipzig
Hanover in Tareenadu Leipzig
Hamburg si Tareenadu Leipzig
The West Rhine Railway Yurub Tareen Tours, Germany
Waayo, mid kasta oo jecel xaqse, quruxda knockout, Daar wayn iyo qorrax beero canab ah ku maydhaa, stretch muuqaal dabiici ah taas oo ay weheliso River Rhine waa meesha waa in aad u tagto. kortaan The tareenka u dhexeeya magaalooyinka Jarmal Cologne iyo Mainz waa mid ka mid weligiis iyo weligiisba aad xusuusan doonaa. Bbc sawir-kaamil ah ay ka tagi doono aad neefsan! romantics True rumeeyey dhammaato farxad iyo Sixir ekayd Khayrja doonaa xeryahoodii jiidasho ayaar loo marayo canab ah oo cagaar ah. The tareenka West Rhine ayaa adduunka ka caan oo qayb ka ah "Romantic Rhine" safarka, sidaa darteed haddii aad heysato qof aad jeceshahay in aad la socdaan keeno, sidaa sameeyaan. Waxaad heli doontaa waqti ah la ilaawi karin, dadka kale la mid ah sida dad badan oo ka dhigay tareen West Rhine qayb ka mid ah tours ay tareenka Yurub.
Lyon ayaa quruxda badan waa magaalada saddexaad ee ugu weyn France iyo xarunta run firfircoon ee dalka. Waa xaqiiqo ah dheeraad ah oo lagu noolaan karo iyo Noqosho dabacsan ka badan caasimada, bixiya madadaalada rukun kasta. Lyon oo dhan uu leeyahay: matxafyada, maqaayado, yaalaaan, iyo dukaamo asalka ah, iyo sidoo kale a tiro badan oo ah baararka iyo cawaysyada. Waxaa sidoo kale waa jaamacadda firfircoon magaalada, sidoo booqo on your tours tareenka Yurub. dhismayaasha quruxda badan Cafiyi River Rhone ah, ballaaran beeraha iyo jawi isufaan saamayn dhaqanka Faransiis kala duwan - waxa aan u jeclaadaan?
Paris si ay Tareenadu Lyon
Marseilles ilaa Tareenka Sare ee Lyon
[https://www.youtube.comwatch?= MozmhlEKk0E ah
No tours tareenka Yurub waa dhamaystiran oo aan fuushanaa iyada oo Bbc picturesque ee Tuscany. Tani gobolka ee dalabyo dhexe ee Italy indhaha breathtaking iyo waxay bixisaa dhowr ah dhibcood oo xiiso aad gabi ahaanba waa inay booqdaan. From ugu halyeey Renaissance tahay Michelangelo iyo Botticelli, inay shuqullo wanaagsan Apennines Hooyada Dabeecadda, Tuscany waa heer sare. A safar tareen fiican loo qorsheeyay aad qaadan karto ee xeebaha ku teedsan Badda Tyrrhenian, ama ha aad arki beero canab ah ka socdeen ee Chianti.
Milan in ay Tareenadu Chianti Castellina
Florence si Tareenadu Chianti Castellina
Naples si Tareenadu Chianti Castellina
Rome si ay Tareenadu Chianti Castellina
Save A tareenka kaa caawinaysaa in aad ballan tareen si aad u socoto ee 3 daqiiqo, at heerka ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-european-train-tours/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#travelfrance #travelspain tareen safarka travelgermany travelitaly